तपाईं डिस्को मा मान्छे को ध्यान आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ? तर, म केटाहरू ochkarichkoy कल, तपाईं मा हाँस्न हुनेछ लाग्छ? त्यसपछि रंग सम्पर्क linzy मा चश्मा समायोजन - र सबै मान्छे आफ्नो खुट्टा मा हुनेछ। तपाईं रंग पलिमर FreshLook श्रृंखला मदत गर्न सक्छ बाटो परिवर्तन गर्नुहोस्। यी विकल्प धन्यवाद तपाईंको दृश्य expressive र सेक्सी हुनेछ स्कोर। आज हामी यी नरम माल को सुविधाहरू सिक्न, साथै पत्ता के प्रयोगकर्ता र ophthalmologists तिनीहरूलाई सोच्न।
FreshLook लेन्स छ कि दृष्टि सच्याउन, तर पनि मात्र सक्षम एक रंग hydrogel सामाग्री छ आँखा रंग परिवर्तन गर्न। आफ्नो नयाँ मित्र पनि तपाईं विकल्प अंक प्रयोग गर्न सुझाव सक्छ। किन FreshLook रंग लेंस दुनिया मा सबै भन्दा लोकप्रिय कस्मेटिक पलिमर छन् भन्ने छ। तिनीहरूले diopters उपलब्ध छन्, र तिनीहरूलाई बिना।
संपर्क लेंस FreshLook - ज्ञात दृढ Ciba विजन को रंग पलिमर। तिनीहरूले मानिसहरूलाई जो लागि उपयुक्त हो:
तिनीहरूले छवि परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ;
म तिनीहरूलाई expressive बनाउन आफ्नो आँखा केन्द्रित गर्न चाहनुहुन्छ;
तिनीहरूले छवि आकर्षक र सेक्सी बनाउन चाहन्छु।
यी विकल्प अंक निम्न समूह विभाजित छन्:
दिन वेयर लागि FreshLook लेन्स: एक दिन (उजाला)।
आयाम, रंग, ColorBlend: मासिक प्रयोगको लागि बहुलक।
प्रत्येक लेन्स यसको आफ्नै उद्देश्य र सर्वोच्चता छ।
पलिमर को श्रृंखला एक दिन
यी संपर्क लेंस प्रकाश र अँध्यारो आँखाको धारकहरु द्वारा पहना गर्न सकिन्छ। हरेक समय एक व्यक्ति एक नयाँ स्टेराइल जोडी लगाउने हुनेछ दिनमा यस्तो पलिमर को फाइदा। र यो, पहिले, बेचैनी मानिसलाई, किनभने एक महिना वा छ महिना वेयर लागि लेंस को ल्याउनेछ छैन हेरविचार धेरै आवश्यक छ। र दोश्रो, यी पलिमर लगाएका गर्दा पूर्ण संक्रामक आँखा रोग वा एलर्जी प्रतिक्रिया को जोखिम समाप्त।
FreshLook एक दिन लेंस लागि आदर्श हो:
ज्यादातर चस्मा लगाउनु, तर सम्पर्क लेन्स गर्न resorted मात्र केही अवस्थामा मानिसहरू।
प्रयोगकर्ता आँखा रंग परिवर्तन गर्न चाहने।
श्रृंखला पलिमर आयाम
यी रंग लेंस FreshLook प्रकाश आँखा को मालिक को लागि विशेष डिजाइन। तिनीहरूले पारदर्शी, चम्किलो रंग हो। त्यसैले, जब एक केटी तिनीहरूलाई लगाउनुहुन्छ, उनको प्राकृतिक आँखा रंग लेन्स रंग जोडिएको छ। यो एक अद्वितीय संयोजन खेल्छ। बहुलक यस प्रकारको को peculiarity तिनीहरूलाई थप expressive बनाउने, आँखा enlarges जो कोइला को बाह्य, वरिपरि गाढा घन्टी सिर्जना छ। लेन्स FreshLook यो मोडेल, प्राकृतिक रंग बढाउँछ आँखा उज्यालो र ठूलो बनाउँछ। यस्तो पलिमर मा, बालिका मजबूत सेक्स को ब्याज र प्रशंसा कारण, अचम्मको हेर्न हुनेछ।
उत्पादन रङ्ग लेंस FreshLook आयाम तीन रंग मा: नीलो, हरियो र फिरोजा।
विकल्प अंक ColorBlend श्रृंखला
यी बहुलक उत्पादनहरु नरम रंग परिवर्तन हुँदै हल्का र गाढा आँखा लागि डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। रंगीन लेंस FreshLook यो श्रृंखला सुविधा छ: तिनीहरूले "1 मा 3" एक पेटेंट प्रविधिको प्रयोग। यसको सार को बहुलक नै चरणमा विभिन्न रंग, सामेल र एक अद्वितीय संयोजन फारम छन् जसमा लागू गरिन्छ भन्ने छ। परिणाम आइरिस को एक उज्ज्वल छवि छ। कारण लेन्स संतृप्त छ भन्ने तथ्यलाई गर्न, यो पनि गाढा खैरो आँखा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
यो श्रृंखला मा एक लोकप्रिय विकल्प हो: एक वास्तविक नीलम र नीलो हीरा।
रंग श्रृंखला पलिमर
सम्पर्क लेन्स FreshLook यो मोडेल विशेष गाढा आँखा लागि डिजाइन। यी पलिमर को निर्माण समयमा monochromatic colorant को रंगा र undyed अंश एक निश्चित क्रममा भिन्न त्यस्तो लागू गरिएको छ। जब यस्तो लेन्स, को पारदर्शी आफ्नै आइरिस मार्फत देखिने क्षेत्र मा एक व्यक्ति राख्छ। फलस्वरूप, प्रयोगकर्ता एक नयाँ, उज्ज्वल, प्राकृतिक रंग प्राप्त गर्दछ।
FreshLook लेन्स आधुनिक भौतिक बनेको छ - femflkona ए यो बहुलक पहनने को सम्पूर्ण अवधि लागि सान्त्वना प्रदान गर्दछ।
यो कम्पनी को विकल्प अंक पराबैंगनी विकिरण देखि आँखा रक्षा गर्न सक्षम छन्।
सबै लेंस नजरमा उत्पादन को उचित स्थापनाको लागि एक सूचक हो जो FL लेखिएको, छ।
लेंस FreshLook रंग र ज्यादातर सकारात्मक प्रतिक्रिया मान्छे प्राप्त यी पलिमर अन्य प्रकार। जस्तो धेरै बालिका यी hydrogel उत्पादनहरु को मद्दतले परिवर्तन वा आँखाको रंग सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि त्यहि रंग संग उपयुक्त diopter चयन गर्न सक्नुहुन्छ। पनि यो श्रृंखला र कुन दिन लेंस जस्तै बालिका कुनै मर्मत आवश्यक छ। आखिर, हरेक दिन नयाँ पलिमर परिवर्तन गर्न सकिन्छ। मासिक प्रयोगको लागि अंक विकल्प प्रयोगकर्ता बीच एक विशेष डर पैदा गर्दैन। आखिर, पर्याप्त समाधान, चिमटी र एक विशेष भण्डारण ट्यांक किन्न। साथै, लेन्स आँखा बाहिर सूखी गर्छन् भनेर होइन र चोट छैन, समय हटाइनु पर्छ।
तर यी लेन्स संग दुखी भएका मान्छे छन्। उदाहरणका लागि, केही महिला कि पलिमर मा निराश भन्छन्। यो अप्टिकल आँखा मा लेन्स फिटिङ को पाठ्यक्रम मा प्राकृतिक जस्तो कि बाहिर जान्छ। र जब तपाईं सडक मा बाहिर जाने, यो तुरुन्तै स्पष्ट लेन्सको नजरमा कि बन्नेछ। यो वास्तवमा हुन सक्छ भने, उदाहरणका लागि, प्राप्त निलो विकल्प अंक को प्रकृति मा खैरो आँखाले केटी। त्यसपछि साँच्चै यो कवर, र एक कुरूप रंग बारी। साथै, बालिका र मान्छे केही घण्टा पछि लेंस FreshLook रंग सुरु लगाउने भनेर भन्न आँखा कटौती। र यो साँचो हो। तथापि, सबै रंग पलिमर गरिब अक्सिजन permeability को बेफाइदा छ। त्यसैले, केही समय पछि, प्रयोगकर्ता साँच्चै असहज महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यो जोगिन, तपाईं आँखा विशेष मइस्चराइजिंग एजेन्ट, जो पनि ओप्टिक्स खरीद गर्न सकिन्छ खन्नुहोस् समय आवश्यक छ।
डाक्टर को राय
Ophthalmologists ब्रान्ड सम्पर्क लेन्स FreshLook बारेमा सकारात्मक। डाक्टर द्वारा उल्लेख रूपमा यी पलिमर नरम, आराम गर्दै छन्। यसलाई -8 गर्न अप्टिकल तिनीहरूलाई6देखि ब्याण्ड देखि, कुनै पनि व्यक्ति को लागि लेंस छनोट गर्न सम्भव छ। यो टाढा-sighted लागि तिनीहरूले खरिद गर्न सकिँदैन, त्यो र छोटो-sighted मान्छे को लागि बाहिर जान्छ। त्यहाँ पनि लेंस र उत्कृष्ट दृष्टि संग प्रयोगकर्ताहरूको लागि शून्य diopter छन्। पनि वास्तवमा जस्तै डाक्टर यी प्लास्टिक उत्पादन पराबैंगनी विकिरण देखि आँखा रक्षा गर्न सक्षम छन्।
मात्र कुरा के तपाईं ध्यान ophthalmologists तिर्न, त्यसैले यसलाई यस्तो लेन्स मात्र परीक्षा र परामर्श एक विशेषज्ञ संग पछि आवश्यक छ प्राप्त गर्न भन्ने तथ्यलाई छ। आफ्नै मान्छे सही यी विकल्प अंक को सही रंग छनोट आउट गर्न सक्षम छैनन्। को स्वागत मा, डाक्टर, दृश्य acuity जाँच गर्नेछ, निदान एक विशेष प्रयोगकर्ता लेंस को के दायरा अनुरूप हुनेछ निर्धारण।
तपाईं संग संपर्क लेंस FreshLook परिचित त। हामी त्यहाँ यी पलिमर धेरै प्रकार हो भनेर बुझे। र व्यक्तिको प्राथमिकताहरू आधारमा आफूलाई लागि उपयुक्त विकल्प यी विकल्प अंक चयन गर्न सक्नुहुन्छ। खरिद गर्नु अघि, एक नेत्र रोग विशेषज्ञ संग एक परामर्श र परीक्षा को लागि आफ्नो सिद्ध लेन्स रंग चयन गर्न सँगै विशेषज्ञ संग, जाने र सुनिश्चित।
आँखा मा रक्त नली के फुट्छ गर्छन्?
सुक्खा आँखा को प्रभावकारी र सस्तो घटेको
किन हेलो प्रभाव लेजर दृष्टि सुधार पछि देखिन्छ?
लेजर सुधार: दृष्टि कसरी सच्याउन
एक बच्चा मा Strabismus: कसरी उपचार गर्न र कसरी सहयोग गर्न?
ओपल Astra परिवार - ठूलो क्षमता संग एक परिवार कार
मलोर्का को सबै भन्दा राम्रो समुद्र तट: एक सिंहावलोकन
केश लागि विभिन्न फलाम? समीक्षा, अधिग्रहण र प्रयोगमा सल्लाह
इस्तानबुल सुल्तान Suleiman को दरबार। इस्तानबुल यात्राहरु। इस्तानबुल आकर्षण
"भ्यान Cleef": उनको लागि र उहाँको लागि एक अत्तर
"साना विश्वास": अभिनेताहरु। "साना वेरा": षड्यन्त्र र फिल्म विवरण
जनावर: budgerigar - मर्मतका र हेरविचार
होटल एलीस होटल (होर्घडा, मिश्र): विवरण, समीक्षाहरू
वित्तीय बजार। वित्तीय बजार सहभागीहरू रूस
मित्र को विवाह गर्न उपहार र बधाई